Gini bu igwe eji enyere anyi aka? | ebike Shuangye
Mbido blog News Gini bu igwe inyeaka aka?
Datebọchị ： 2020-07-15 Categories ：News Nlele ： 2,763
A ike nyere igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe eletriki eletrik, bụ mgbatị pedal na igwe eletrik jikọtara iji nyere onye na-agba ya aka. Igwe ọkụ eletrik a na-ejikọtara nwere ike inye aka na pedals nwere ike ịbụ ihe kachasị mkpa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchekwa oge, ụfọdụ ike enyere igwe kwụ otu ebe tinyekwara isi mkpịsị aka, gbanwere ma ọ bụ pịa ntụgharị iji nwee ọmarịcha njem ịnyịnya eletrik.
Gini bụ enyere aka nzi?
Pedal aka bụ nkịtị ike aka bike, nwekwara otu n'ime akụkụ dị mkpa nke dum e-bike. Pedal aka bụ otu n'ime ọrụ ụdịdị na ike aka bike iji gbanye e-igwe kwụ otu ebe moto-enyere gị aka pedal. Imirikiti e-igwe kwụ otu ebe nwere ihe enyemaka na-arụ ọrụ nke na-enyere gị aka ịmegharị moto ahụ site na iji ụkwụ kama iji ntụgharị ma ọ bụ mkpịsị aka. Uru dị mfe. Kama ịgbagọ ma ọ bụ ịpị trotul iji rụọ ọrụ igwe eletriki igwe eletrik gị, bido ịmalite pedal na moto ahụ ga-enweta ike na akpaghị aka. Ọtụtụ mgbe, a na-etinye ihe mmetụta ọsọ ọsọ ma ọ bụ ihe mgbapụta na ihe mgbakwasị ụkwụ nke igwe enyemaka ike - axle ma ọ bụ shaft na-ejikọ pedal abụọ ma nye ha ohere ịtụgharị. Ntọala na ngosipụta e-igwe na-ekpebi ike igwe ga-eji nyere gị aka.
Ihe mmetụta ọsọ VS Torque ihe mmetụta
Mfe na ịkọ ọdịnihu bụ uru nke ihe mmetụta ọsọ ọsọ na-enyere aka. Mgbe ịmalitere pedal, moto ahụ ga - adị ike, inwere ike ịtọ ike ole igwe ga - achọ inyere gị aka mgbe ị na - aga ije. Dịka ọmụmaatụ, Shuangye igwe eletriki igwe eletrik nwere 6 Pedal Assist Levels, site na 0 ruo ọkwa 5. Mgbe ị na-aga ụkwụ, ị ga-eche na ị naghị etinye ike ọ bụla na njem ahụ - moto ahụ na-arụ ọrụ niile. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inye aka ike ụkwụ ma nwee mmega ahụ, ịnwere ike iwetulata ọkwa aka pedal na ngosipụta e-bike gị site na bọtịnụ.
Mmetụta torque na-ekwe nkwa na ị ga-enwe mmega ahụ na igwe gị. The torque mmetụta naanị activates moto dị ka ogologo oge ị na-enwe nrụgide na pedals. The moto ga-eweputa otu nke ike 1: 1 ike ịgbanwe ka e-bike dị ka ọsọ nke pedal. Yabụ, ị ga-enyocha ogo nke inye aka na mgbatị ole ịchọrọ inweta site na pịkụl.
Ọdịiche dị n’etiti igwe kwụ otu ebe na moto enyere aka
Igwe igwe kwụ ọtọ na-enyere aka bụ igwe kwụ otu ebe na moto eletriki jikọtara iji nyere onye na-agba ya nọ. Ke akpa ilegharị anya, ụfọdụ ọgba tum tum nwere pedal yiri nke igwe eletrik enyere aka. Mana imirikiti ọgba tum tum arụghị arụ ọrụ. N’ezie, igwe kwụ otu ebe na elele elekere nwere nnukwu ọdịiche na akụkụ ụfọdụ, dịka ọsọ, spacing cfeing, nauyi, oche oche, ọdịdị oche na ịnya isi.
Ọ bụrụ n'ụgbọala abụọ nwere oche na-agbanwe agbanwe yana ọtụtụ aka iji mee ka ọ dị mfe ịgba ọsọ, yana ngwugwu batrị na moto eletrik iji nyere onye na-agba ya aka. Mgbe ahụ, ọ bụ igwe kwụ otu ebe enyere aka.
Ọ bụrụ na dabara n’ọdụ ụgbọala abụọ ka enwee ike ya n’ọkụ ma ọ bụ ndị na-agba mmanụ abụghị ihe bụ isi. O doro anya na ha abụghị igwe kwụ otu ebe enyere aka, ha nwere ike ịkpọ ọgba tum tum ma ọ bụ ọgba tum tum.
Edemede a na-agwa gị ihe ike igwe kwụ otu ebe na-enyere ya aka na ntụnyere ọgba tum tum. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere igwe eletrik nyere aka, ị nwere ike ịgagharị akụkọ ndị gara aga ma ọ bụ gaa na Ụlọ Ọrụ Weebụ, nwekwara ike ịhapụ anyị ozi n'okpuru.
Tags:ike aka igwe ike nyere anyị igwe
Mbụ: Etu esi edobe batrị igwe eletrik
Next: Egwuregwu 3 E Na-ewu ewu Maka Ere - Na-egbo Mkpa Gị